China Automatic electromagnetic / entona fanafanana Multi-shaft stir-fryer / cooker mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
Fanafanana electromagnetika/gazy mandeha ho azy
Toetra mampiavaka:1. Mampihetsi-po sy manendasa automatique multi-shaft (afaka mihodinkodina sy mihodinkodina ny lelany mihetsiketsika);2. Mora ny miasa (azo mitongilana ny vatan'ny vilany, ary ny fitaovana dia arotsaka amin'ny herin'ny hydraulic);3. Fotoana endasina tsara;4. Afangaro / afangaro amin'ny hafanana;5. Electromagnetic fanafanana dia angovo-mitsitsy sy fiarovana ny tontolo iainana, mamonjy herinaratra raha oharina amin'ny mahazatra fanafanana herinaratra Conduction menaka, fanafanana haingana, ary ny mari-pana dia voafehy;6. Ny vilany anatiny sy ivelany dia vita amin'ny vy tsy misy pentina, tsara tarehy amin'ny endriny, mirindra amin'ny rafitra ary mora diovina.
Mety amin'ny fandrahoan-tsakafo sy fandrahoan-tsakafo isan-karazany, henan-trondro, zava-manitra, fanafody ary fitaovana hafa.Izany no be mpampiasa amin'ny catering, fanodinana sakafo, famokarana fanafody, braised vokatra, condiment fanodinana, sakafo tsakitsaky, mofo sy ny indostria hafa.Azo ampiasaina amin'ny ketchup koa izy io.Ny fandrahoan-tsakafo vokatra avo lenta toy ny saosy hen'omby sy ny akora vita amin'ny vilany mafana dia fitaovana tsara amin'ny fanodinana sakafo mba hanatsarana ny kalitao, hanafohezany ny fotoana ary hanatsara ny toetry ny asa.
Ny hafanana dia haingana, ary ny mari-pana dia azo amboarina;Misy probe roa ao anaty vilany mba handrefesana ny hafanan'ny vatany sy ny hafanan'ny sakafo.
Microcomputer mazava tsara fanaraha-maso ny mari-pana sy ny mari-pana fampisehoana, mandeha ho azy toe-javatra, mandeha ho azy fanairana rehefa tonga ny fotoana na ny mari-pana, ny fanodinana teknolojia dia mora ny mifehy, ny sakafo fanodinana dingana manana repeatability tsara, tsara kokoa ny kalitao sy ny fahamarinan-toerana kokoa;
Satria ny fihetsehan'ny planeta no ampiasaina, dia tsy hifikitra amin'ny lapoaly ny sakafo voahodina, ary tsy hamorona vongany na coke;mampiasa menaka kely izy io ary mora ampiasaina.Ny sisa tavela amin'ny dingan'ny fry dia tsy mora ny miraikitra amin'ny vilany ary mora diovina.
Ny fandrahoan-tsakafo marobe dia mampiasa fanafanana elektromagnetika ho loharanon'ny hafanana (azo ampiasaina koa ny fanafanana entona).Ny fandrahoan-tsakafo multi-stirring dia manana ny toetran'ny faritra fanafanana lehibe, ny fahombiazan'ny hafanana avo, ny fanamainana fanamiana, ny fotoana mangotraka ranon-javatra fohy, ary ny fifehezana mora ny mari-pana.Ny vatan'ny vilany anatiny (vilany anatiny) dia vita amin'ny vy tsy misy pentina, miaraka amin'ny scraper tetrafluoroethylene, Schneider PLC.Ny endrika tsara tarehy, ny fametrahana mora, ny fandidiana mety, azo antoka sy azo antoka.
Ny milina iray manontolo dia manana teknolojia welding tsara tarehy, welding corrugated seamless, tora-kofehy mazava, tsy misy banga, ary endrika tsara tarehy ny vokatra.
Multi-head multi-stir planeta mixing system, mampiasa ny fitambaran'ny revolisiona sy ny fihodinana, ny fitaovana dia mihetsiketsika sy mafana mitovy.Ny faran'ny vilany dia kikisana ary ahetsiketsika amin'ny 360 degre tsy misy fiafarana maty mba hanatsarana ny loko sy ny tsiron'ny akora.
Ny vatan'ny vilany anatiny sy ivelany ary ny faritra mifandray amin'ny fitaovana dia vita amin'ny vy 304 stainless, izay mora diovina ary mahafeno ny fepetra takian'ny fahadiovana.
Ny lelan'ny famporisihana natao sy ny lelan-tsarimihetsika dia vita amin'ny PTFE matanjaka, ny hafanana ary ny hafanana avo, tsy misy poizina, ary mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana sakafo.
Ny scraper dia manana adhesion avo lenta amin'ny vatan'ny vilany, ary ny fikikisana ambany dia lalina kokoa, ary ny tranga miraikitra amin'ny vilany dia tsy mora mitranga.
Miaraka amin'ny fandoroana angovo tsy manam-paharoa, ny fandoroana feno, ny fahombiazan'ny hafanana avo, ny fitsitsiana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fitaovana fanamafisam-peo mahatohitra hafanana, mampiasa angovo bebe kokoa, ny fahombiazana dia mety hahatratra mihoatra ny 70%.
teo aloha: Etona / entona / elektrika / fanafanana electromagnetika Planetary stir-cooker / fryer
Manaraka: Etona sy AIR RETORT
Machine Mixer Cooker
Tefal Multi Cooker sy Afangaro
vacuum hena tumbler milina mihodina
Separator taolana trondro
PANETY HENA BOWL & CHOPPER